Aqoonta birta (biibiile bilaa bir ah iyo saxan)
1.Biib biraha aan xuduud lahayn: biibiile aan xuduud lahayn waa nooc ka mid ah birta dheer oo leh qaybta godan oo aan lahayn tollayn. Biibiilaha birtu wuxuu leeyahay qayb godan, kaas oo si weyn loogu isticmaalo daabulka dareeraha, sida saliidda, gaaska dabiiciga ah, gaaska, biyaha iyo qaar ka mid ah qalabka adag. Marka la barbardhigo birta adag sida birta wareegsan, biibiile aan xuduud lahayn ...
Sannadka 2021, hawlgalka guud ee dhaqaalaha ee warshadaha mishiinnada ayaa tusi doona isbeddel xagga sare ah xagga hore iyo xagga dambe, iyo heerka kobaca sannadlaha ah ee qiimaha warshadaha lagu daray wuxuu noqon doonaa qiyaastii 5.5%. Baahida birta ee ay abuurtay maalgashiyadan ayaa soo bixi doonta sanadkan. Isla mar ahaantaana, pop -ka ...
Xiao Yaqing, Wasiirka Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyadda Warfaafinta ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha, ayaa dhowaan soo jeediyay in wax soo saarka biraha ceyriinka ah si adag loo yareeyo si loo hubiyo in wax soo saarka 2021 -ka uu hoos u dhici doono sannadba sanadka ka dambeeya. Waxaan fahamsanahay in yareynta birta ka soo baxda ...
Dheelitir la'aanta sahayda iyo baahida! Qiimaha mustaqbalka macdanta birtu waxay gaadhay heer aad u sarreeya
Maanta, mustaqbal aan madhanayn, oo madow ayaa kor u kacay guddiga oo dhan, dib -u -soo -celinta ganacsiga ugu weyn, ayaa soo sheegay 6012 yuan halkii ton. Sida alaab ceeriin oo bir ah, mustaqbalka macdanta birta qiimaha qandaraaska ugu weyn ayaa sidoo kale ah ganacsi, oo dhigay rikoor sare. Maanta, ka hor furitaanka suuqa mustaqbalka gudaha, heshiiska ugu weyn ee Si ...
Saadaasha isbeddelka suuqa ee biibiilaha birta aan xadka lahayn ee 2021
Intii lagu jiray muddadii Qorshaha Shanta Sano ee 13aad, 135.53 milyan oo tan oo tuubooyin bir ah oo aan xuduud lahayn ayaa laga soo saaray Shiinaha, wax soo saarka sanadlaha ahna waa qiyaastii 27.1 milyan oo tan, oo aan lahayn kor iyo hoos. Farqiga u dhexeeya sannadaha wanaagsan iyo sannadaha xun wuxuu ahaa 1.46 milyan oo tan, oo leh farqi u dhexeeya 5.52%....